Hive Project စျေး - အွန်လိုင်း HVN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Hive Project (HVN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Hive Project (HVN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Hive Project ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
HVN – Hive Project
Market ကဦးထုပ်: $571 880.00
volume_24h_usd: $4 246 880.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Hive Project တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Hive Project များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Hive ProjectHVN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00502Hive ProjectHVN သို့ ယူရိုEUR€0.00428Hive ProjectHVN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00385Hive ProjectHVN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00461Hive ProjectHVN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0453Hive ProjectHVN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0319Hive ProjectHVN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.112Hive ProjectHVN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0189Hive ProjectHVN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00669Hive ProjectHVN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00705Hive ProjectHVN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.113Hive ProjectHVN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0389Hive ProjectHVN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.027Hive ProjectHVN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.375Hive ProjectHVN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.85Hive ProjectHVN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0069Hive ProjectHVN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00767Hive ProjectHVN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.156Hive ProjectHVN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0349Hive ProjectHVN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.535Hive ProjectHVN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩5.95Hive ProjectHVN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.95Hive ProjectHVN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.368Hive ProjectHVN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.139
Hive ProjectHVN သို့ BitcoinBTC0.0000004 Hive ProjectHVN သို့ EthereumETH0.00001 Hive ProjectHVN သို့ LitecoinLTC0.00009 Hive ProjectHVN သို့ DigitalCashDASH0.00006 Hive ProjectHVN သို့ MoneroXMR0.00006 Hive ProjectHVN သို့ NxtNXT0.407 Hive ProjectHVN သို့ Ethereum ClassicETC0.00075 Hive ProjectHVN သို့ DogecoinDOGE1.5 Hive ProjectHVN သို့ ZCashZEC0.00006 Hive ProjectHVN သို့ BitsharesBTS0.195 Hive ProjectHVN သို့ DigiByteDGB0.168 Hive ProjectHVN သို့ RippleXRP0.018 Hive ProjectHVN သို့ BitcoinDarkBTCD0.000176 Hive ProjectHVN သို့ PeerCoinPPC0.0169 Hive ProjectHVN သို့ CraigsCoinCRAIG2.33 Hive ProjectHVN သို့ BitstakeXBS0.218 Hive ProjectHVN သို့ PayCoinXPY0.0894 Hive ProjectHVN သို့ ProsperCoinPRC0.642 Hive ProjectHVN သို့ YbCoinYBC0.000003 Hive ProjectHVN သို့ DarkKushDANK1.64 Hive ProjectHVN သို့ GiveCoinGIVE11.09 Hive ProjectHVN သို့ KoboCoinKOBO1.17 Hive ProjectHVN သို့ DarkTokenDT0.00462 Hive ProjectHVN သို့ CETUS CoinCETI14.78
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 03:50:02 +0000.